प्लस टु पछिको गन्तव्य-८
दिनेश गौतम काठमाडौं, २१ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ’प्लस टु पछिको गन्तव्य’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । जसअन्तर्गत आज हामीले ब्याचलर अफ फार्मेसी (B-PHARM)बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो बी फार्म ?
ब्याचलर अफ फार्मेसी (B-PHARM) औषधि विज्ञान हो । झट्ट सुन्दा बी फार्म भनेको औषधि बेच्ने बुझिन्छ । तर, बी-फार्म भनेको औषधि बेच्ने मात्र होइन । औषधि बनाउनेदेखि बिक्री वितरणसम्मको प्रक्रिया सिकाउने शिक्षा नै बी-फार्म हो । औषधि कसरी बनाउने ?
के कस्ता वस्तुबाट औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ ? कुन रोगका लागि कस्तो औषधि बनाउने ? औषधिमा कस्तो केमिकल राख्ने ? औषधिको गुणस्तर कस्तो छ? औषधिले बिरामी निको भए कि भएनन् ? कति समयका लागि बिरामीलाई औषधि दिने? जस्ता विषयलाई बी फार्मले समेट्छ। साथै, यसले नयाँ नयाँ औषधिको खोज तथा अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्छ ।
बी-फार्म स्नातक तहको चार वर्षे कोर्स हो । जसमा ८ वटा सेमेस्टर हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विभिन्न कलेजले बी-फार्म कोर्स सञ्चालन गरेका छन् । तर, फार्मेसीको डिप्लोमा कोर्स भने सीटीईभीटीबाट पनि सञ्चालन गरिएको छ । बी-फार्म अध्ययनपश्चात् नेपालमै मास्टर्स लेभलको एम फार्म अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
कसले पढ्न पाउँछन् ?
सीटीईभीटीबाट फार्मेसीमा डिप्लोमा कोर्स गरेकाले
प्लस टुमा जीपीए २.४ ल्याएकोले
फार्माकोलोजी एन्ड टक्सिकोलोजी
फर्मासिटिकल एनालाइसिस एन्ड क्वालिटी
बी-फार्म पढ्न ७ देखि ९ लाखसम्म खर्च लाग्छ । तर, विश्वविद्यालय र क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाको आधारमा पढाइ खर्च केही तलमाथि हुन सक्छ । एकैपटक पुरै शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, सेमेस्टरअनुसार शुल्क तिर्दै जानुपर्छ ।
विश्वविद्यालयले बी-फार्मका लागि कोटाको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । छात्रवृत्तिका लागि विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा लिन्छ । त्यो परीक्षामा धेरै अंक ल्याउनेले विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् ।
इन्टर्नसिप अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । आठ सेमेस्टरसम्म कम्तीमा एक महिनाको इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पताल र औषधि उत्पादन कम्पनीमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, औषधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि विद्यार्थीलाई देशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणसमेत गराइन्छ ।
कुन क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाइन्छ ?
अस्पताल (सरकारी र निजी)
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय
फार्मेसी पढाइ हुने क्याम्पस
औषधिको बजार व्यवस्थापन
मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, सोल्टिमोड, काठमाडौं
नेसनल मोडेल कलेज फर एड्भान्स, नयाँ बजार, काठमाडौं
जनमैत्री फाउन्डेसन इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, हात्तीवन, ललितपुर
युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, भैरहवा, रूपन्देही
सुनसरी टेक्निकल कलेज, सुनसरी
मट्रिक्स कलेज, पर्सा
सेन्ट्रल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, बानेश्वर, काठमाडौं
मोर्डन टेक्निकल कलेज, सानेपा, ललितपुर
क्रिमसन कलेज अफ टेक्नोलोजी, रूपन्देही
पोखरा युनिभर्सिटी स्कुल अफ हेल्थ एन्ड साइन्स, पोखरा, कास्की
काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ साइन्स, काभ्रेपलान्चोक
भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्स, सीतापाइला, काठमाडौं
कर्णाली कलेज अफ हेल्थ साइन्स, गौशाला, काठमाडौं
लिटल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साइन्स, मीनभवन, काठमाडौं
एसियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिज, सातदोबाटो, ललितपुर
होप इन्टरनेसनल कलेज, सातदोबाटो, ललितपुर
नोबेल एकेडेमी, कास्की
श्री मेडिकल एन्ड टेक्निक कलेज, चितवन
पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी कलेज अफ मेडिकल एन्ड साइन्स, मोरङ
नयाँ नयाँ औषधिको अनुसन्धानका लागि विभिन्न देश जान सकिने सम्भावना छ । विशेषगरी, बी फार्मपछि मास्टर्स लेभलको पब्लिक हेल्थ र एम फार्म पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । नेपाली विद्यार्थी पब्लिक हेल्थ पढ्न जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका देश गएका छन् ।
बी-फार्म पढेपछि स्वरोजगार बन्न सकिन्छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै सामुदायिक फार्मेसी पनि बढ्दो क्रममा छ । गाउँगाउँमा पनि आफैं फार्मेसी खोल्न सकिन्छ । त्यस्तै, अस्पताल वा औषधि उत्पादन कम्पनीमा काम नै गर्ने हो भने पनि सुरु कम्तीमा मासिक २० देखि ३० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ । आफ्नो क्षमता र अनुभवका आधारमा पनि तलब निर्धारण हुन्छ ।
बी फार्मको महत्त्व
औषधि गुणस्तरीय छ कि छैन मापन
नविन श्रेष्ठ , प्राध्यापक, लिटल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साइन्स
राज्यले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने नीति लिएको छ । यसलाई पूरा गर्न औषधि अपरिहार्य हुन्छ । रोग निको पार्न सही औषधि आवश्यक पर्छ । ती औषधि गुणस्तरीय छ कि छैन मापन गर्नुपर्छ । नयाँ नयाँ औषधि उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । ती जनशक्ति उत्पादन गर्न बी फार्र्मको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
औषधि उत्पादन गर्नदेखि बिक्री वितरणसम्म
सुरज शाक्य, बी फार्मेसी संयोजक, नोबेल कलेज
चिकित्सकले रोग पत्ता लगाउँछन् । रोग पत्ता लगाएर मात्र हुँदैन । रोग निको पार्न औषधि आवश्यक पर्छ । कुन रोगका लागि कस्तो औषधि प्रयोग गर्ने हो, त्यो औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ । ती औषधिबाट बिरामीलाई निको पार्ने काम फार्मेसीको हो । यदि औषधि नै नहुने हो भने रोग निको हुन सक्दैन । त्यस्ता औषधि उत्पादन गर्नदेखि बिक्री वितरणसम्मका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यक छ त्यसैले मेडिकल क्षेत्रमा बी फार्मेसीको महत्त्व धेरै छ ।
फार्मेसीबिनाको मेडिकल क्षेत्र कल्पना पनि गर्न सकिन्न
निराजन भुसाल, बी फार्म कार्यक्रम संयोजक, जनमैत्री फाउन्डेसन इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स
फार्मेसीबिनाको मेडिकल क्षेत्र कल्पना पनि गर्न सकिन्न । रोग पत्ता लागेर पनि सही औषधि प्रयोग भएन भने बिरामीको अकालमा ज्यान जान्छ । बिरामीलाई सही औषधि प्रयोग गराउने भनेको फार्मेसीको काम हो । औषधि कति खाने र कुन समयमा खाने भन्ने जानकारी फार्मेसीले दिने हो त्यसैले फार्मेसी शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।
बी फार्मको आकर्षण
बी फार्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, निश्चित संख्यामा मात्र पढाइ हुने भएकाले नाम निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले कतिपय विद्यार्थीले चाहेर पनि पढ्न पाएका छैनन् । पढेपछि छिटो जागिर पाउनुका साथै आफैं सामुदायिक फार्मेसी चलाउन सक्ने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । नोबेलबाट बी फार्र्म गरेकी जिना पौडेल मेडिसिटी हस्पिटलमा कार्यरत छिन् । ‘सानैदेखि मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि भएकाले बी फार्म पढेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अब यही क्षेत्रमा राम्रो गर्ने हो ।’
केयूबाट बी फार्मेसी गरेकी पुजन सापकोटा अहिले औषधि कम्पनीमा काम गर्छिन् । औषधि उत्पादनदेखि गुणस्तर मापनसमेत गर्न आफू सक्षम भएको उनी बताउँछिन् ।
‘औषधि कम्पनी या अस्पताल जुनसुकै क्षेत्रमा गएर काम गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबाट पनि नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन्छ ।’
त्यस्तै, जनमैत्री फाउन्डेसन इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सबाट बी फार्म गरेकी श्रेया लाखेले सामुदायिक फार्मेसी चलाएकी छन् ।
‘फार्मेसीमै सीटीईभीटीबाट डिप्लोमा गरेपछि ब्याचलर पनि फार्मेसीमै गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आफैं सामुदायिक फार्मेसी चलाउन सक्षम भएकी छु ।’
त्यस्तै, गिर्वाण राजभण्डारीले पनि सामुदायिक फार्मेसी चलाएका छन् । ‘बुबाको फार्मेसी थियो, त्यहीँ बस्दा बस्दै औषधिबारे ज्ञान हासिल भएकाले बी फार्म पढेको हुँ,’ उनले भने, ‘अब फार्मेसीलाई नै अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु ।’
अन्त्यमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । प्रदेश र केन्द्रमा पनि ठूला ठूला अस्पताल खोल्ने क्रममा जारी छ । ती स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा फार्मेसी पढेको व्यक्ति आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै, औषधि उत्पादन कम्पनीमा पनि दक्ष जनशक्तिको माग छ । नयाँ नयाँ औषधिको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले बी फार्म शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २१, २०७६, ०८:०८:००
एक सय वर्षको भयो फर्पिङ मावि
साउथ वेस्टर्नको महिला हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम
उपनिर्वाचनः ‘सेलिब्रेटी’प्रति मतदाताको अविश्वास
हेलो सरकार ! सस्ताे सुविधा दिनु ‘टुटल–पठाओ’ काे अपराध हाे ?